Hevitra mandalo ;Resaky ny mpitsimpona akotry : Korana mangigina mety hiteraka kotaba mahery vaika | NewsMada
Hevitra mandalo ;Resaky ny mpitsimpona akotry : Korana mangigina mety hiteraka kotaba mahery vaika
Manantena hisoko miadana toy ny ron-gisa ny fitondrana amin’ny fandrosoana fara-fotoana an’ireo volavolan-dalàna mikasika ny fifiadanana. Na maneno tahaky ny inona aza aty ivelany ny feo milaza ny tsy fankatoavana ny fepetra maro ao anatin’izany volavolan-dalàna izany, mihevitra hanao bao tsy mivily ny governemanta ka tsy hanaiky fikitikitihana ny lahatra atolony.
Manana ny maro an’isa ao amin’ny antenimiera roa tonta, Antenimierampirenena sy Antenimieran-doholona, ny fitondrana ka mazava fa hisosa miadana ny fandaniana an’ireo volavola ho lalàna mahefa. Izany fisosana am-pilaminana eo am-padaniana an’ireo lalàna ireo izany anefa tsy ampy ho antoka hisorohana ny mety ho fisian’ny korontana rehefa tonga ny fampiharana azy. Sanatria arakaraky ny fanakaikezan’ny fotoam-pifidianana ny fandroson’ny rahona manambana fikorontanana.
Ao moa ny alok’ireto lalàna izay tsy ankatoavin’ny olona sy vondrona maro fa efa eo koa ny tandidon’ny disadisa tsy tambo isaina anivon’ny fiaraha-monina. Toy ny nifanao fotoana ny sokajy maro izay samy maneho karazana lonilony samy hafa. Misy ihany angamba ny mpampandotso araky ny filazan’ny fitondrana, fa eo koa ny fahaleovan’ny olona noho ny hetraketraky ny fahasahiranana mitombo tsy misy farany. Hitsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha. Ary raha tsy mbola misy ny antony ahatongavan’ny fahatezerana, sarotra no hamporisika ny mponina ho romotra amin’ny tsy misy antony.
Lasa ihany ny sain’ny solombavambahoaka sasantsasany. Ny lanitra ho manga ihany, fa raha mivadika ny toetr’andro eo amin’ny fitondrana ka tsy ho azo antoka intsony ny fitafiana loko manga mety ho izy ihany koa no ho voafaokan’ny rivotra mitondra fanovana raha mitsofoka ho anisan’ny tompon’antoka amin’ireto lalàna voampanga ho tetika fandravana ny fananana vintana sy zo sahala eo anoloan’ny fahalalahan’ny vahoaka hisafidy izay ametrahany ny fitokisany. Ny mpifidy koa efa tonga saina ho azy, tsy mila fanentanana intsony noho izy efa matetika voafitaka. Misy aza milaza fa efa tsidrin-daona mikasika ny fifidianana ny maro eo am-piadrasana an’ilay fotoana hanaovany kendry tohina. Na izany aza, mety ho diso ihany izay tetika izay. Tsy natao ho fanalana alahelo ny fifidianana fa natao ho fiarahana mikaroka ny tsara ho an’ny ho avy. Na eo amin’ny fisafidianana aza, tsy azo adino ny lasa sy ny ankehitriny.